Ny fanampiana tsara indrindra manohitra ny fahanterana: Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Taorian'ny fanadihadiana tamin'ny 2019 dia namarana izany Nicotinamide Mononucleotide azo antoka ho an'ny fihinanan'olombelona raha toa ka voafetra amin'ny fetra voatondro ny fanjifana azy, orinasa mpanamboatra maro no niditra an-tsena niaraka tamin'ny fanatiny. Ity safidy be loatra amin'ny safidy ity dia nahatonga ny mpividy hafangaro momba izay Nictonimade Mononucleotide (NMN) fanampiny no tsara indrindra ho azy ireo. Raha ny hevitray, ny famenon-tsakafo tsara indrindra an'ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN) amin'ny taona 2021 dia ny orinasa Cofttek.
Cofttek dia orinasa manana isa A + izay efa eo an-tsena efa ho 12 taona izao ary namorona toha-mpanara-dia tsy mivadika mandritra io fotoana io. Ny vovo NMN natolotry ny orinasa dia nosedraina laboratoara telo, NMN kilasy fanafody avy amin'ireo orinasa mitovy aminy izay namatsy ny NMN ho an'ireo fitsapana ara-pahasalamana manan-danja isan-karazany nitranga nandritra ny taona maro. The Vovoka NMN nomen'ny Cofttek dia manamora ny fidirany mora ao amin'ny vatana, ka mampitombo ny bioavailability ny vokatra ary koa ny fiasa ara-batana. Ny tena zava-dehibe kokoa dia tonga marobe io vovony io ary azonao atao ny manangona azy mandritra ny telo volana. Ao amin'ny rehetra, ity no iray amin'ny famatsiana tsara indrindra hita eo amin'ny tsena miaraka amin'ny isa avo lenta amin'ny mpampiasa ary avy amin'ny orinasa iray izay nitondra vokatra azo itokisana sy mahomby isan-taona.
Inona ny atao hoe Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
Inona no mahasoa an'i Nmn?
Azonao atao ve ny mamadika ny fahanterana?
Ahoana no hampitomboanao ny Nmn voajanahary?
Afaka mampitombo ny faharetana ve i Nmn?
Mandra-pahoviana no mijanona ao amin'ny rafitrao i Nmn?
Inona no mitranga rehefa mitsahatra tsy mandray Nmn ianao?
Inona no fanampiana tsara indrindra amin'ny hoditra efa antitra?
Ahoana no ahafahako mamadika ny ketrona voajanahary?
Ahoana no ahafahako mamadika ny hoditra efa antitra?
Inona no soso-kevitr'i Sinclair?
Misy vokany ratsy ve i Nmn?
Inona avy ireo voka-dratsin'ny resveratrol?
Azo antoka ve ny nikotinamidina horaisina isan'andro?
Fa maninona no ratsy be ny NADH?
Iza no tsara kokoa Nmn na NR?
Inona ny suplement Nmn tsara indrindra?
Mivadika ny fahanterana ve i Nmn?
Ohatrinona ny NMN tokony horaisinao?
Mitovy amin'ny b3 ve i Nmn?
Inona no sakafo manana ny fatran'ny NAD + avo indrindra?
Mahatonga ny flmn ve i Nmn?
Aiza no hividianako Nmn any Canada?
Milamina ve i Nmn?
Ahoana no hampitomboako ny NAD + voajanahary?
Inona no tokony ho entiko miaraka amin'ny NMN?
Tokony handray TMG miaraka amin'ny NMN ve aho?
I Nmn dia niacin?
Mampihena ny BP ve ny nicotinamide riboside?
Aiza no ahitana betaine?
Inona avy ireo sakafo manakana ny ketrona?
Ahoana no ahafahako mijery tanora 10 taona?
Ahoana no ahafahako manajanona ny tavako tsy ho antitra?
Inona avy ireo sakafo mahatonga anao ho antitra haingana?
Inona no vitamina mety amin'ny ketrona amin'ny tarehy?
Maninona Isika no Mila Mononucleotide Nicotinamide (NMN)?
Ampiasaina ny Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Aiza no hividianana vovoka Nicotinamide Mononucleotide (NMN) amin'ny Bulk?
Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7) na NMN dia nukleotida izay misy voajanahary ao anatin'ny ankamaroan'ny sakafo hanintsika. Izy io dia hita ao amin'ny zavokà, broccoli, kôkômbra, laisoa, edamame ary voatabia. Na izany aza, ny habetsaky ny NMN omen'ireto sakafo ireto dia tsy ampy hahavelomana ny vatana, ary noho izany dia matetika ny olona no amporisihina handray fanafody NMN. Saingy, maninona ny NMN no tena zava-dehibe amin'ny vatana?
Nicotinamide Mononucleotide na NMN dia mpialoha lalana an'ny Nicotinamide Adenine Dinucleotide na NAD +. Raha tsorina, ny NMN dia fitambarana niova ho NAD + tamin'ny alàlan'ny andian-dahatsoratra simika nitranga tao anatin'ny sela. Ny NAD +, etsy ankilany, dia heverina ho zava-dehibe amin'ny vatana satria manao asa lehibe maromaro, ao anatin'izany ny fandanjana ny gadona sirkadian'ny vatana, ny fanapahana ny otrikaina hamoahana ny angovo sela, ary ny fanamorana ny fihenan'ny enzymatic, izay manemotra ny fahanteran'ny sasany. Mampalahelo fa na dia hita ao anatin'ny sela tsirairay ao amin'ny vatana aza ny NAD + dia mihena arakaraka ny taonany ny famokarany. Ny tena zava-dehibe dia tsy misy ny sakafo azon'ny olona ampitomboina ny famokarana NAD + ao anaty vatana. Noho izany, ny vatana dia mitaky precursor NAD + izay mivadika ho NAD + ao anaty sela, amin'izay dia mampifandanja ny fihenany ao anatin'ny vatana. Eo no ilana ny fampiasana ny fanafody NMN.
Ny NMN dia hita fa manatsara ny asan'ny insuline sy ny famokarana, miteraka tombony fanampiny metabolika ary koa ny fandeferana amin'ny glucose. Manokana, ny fanampiana NMN dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny toetran'ny metabolika toy ny diabeta, aretin'ny atiny ary ny hatavezina.
Ny fitantanana nikotinamide mononucleotide (NMN) noporofoina fa manamaivana ny tsy fitoviana mifandraika amin'ny fahanterana. Ny famenon-tena nototinamide mononucleotide (NMN) dia mampiroborobo ny mombamomba ny fanehoan-kevitra miRNA miady amin'ny fahanterana amin'ny totozy efa antitra, maminavina ny famelomana epigenetika sy ny vokatra manohitra ny atherogenika.
Ny NMN dia azo omena soa aman-tsara ny totozy ary hita voajanahary amin'ny sakafo maromaro, ao anatin'izany ny broccoli, laisoa, kôkômbra, edamame ary ny zavokà. Ny fandinihana vaovao dia mampiseho fa rehefa levona anaty rano fisotro ny NMN ary omena ny totozy dia hita ao anaty lalan-dra ao anatin'ny telo minitra.
Ny mpahay siansa dia nandalina mpanelanelana roa toy izany, nikotinamide riboside (NR) sy nicotinamide mononucleotide (NMN), be lavitra noho ny hafa, ary mamporisika ny fikarohana. Fikarohana marobe no manondro fa ny famenon'ireto mpialoha lalana ireto dia mety hampitombo ny haavon'ny NAD + ary hanalava ny fe-potoana masirasira, kankana ary totozy.
Ny fandinihana ataonay ankehitriny dia mampiseho mazava tsara fa ny NMN dia alaina haingana avy ao amin'ny tsinainy mankamin'ny fifindran'ny rà ao anatin'ny 2-3 min ary koa esorina amin'ny lalan-drà ho lasa sela ao anatin'ny 15 min.
Samy miasa ny Resveratol sy ny NMN amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fahafahan'ny sela ao amin'ny vatanao manamboatra ny tenany. Noho izany, raha raisinao mandritra ny fotoana fohy izy ireo ary aorian'izay dia ajanona izany fa tsy hampihemotra anao avy hatrany amin'ny fanjakana nisy anao alohan'ny handraisanao azy ireo satria ny fanovana dia fanatsarana ny asan'ny sela.
"Nasehon'ny laboratoara anay fa ny fanomezana NMN totozy 12 volana mahery dia mampiseho vokatra manohitra ny fahanterana." Raha ny filazan'i Imai, ny fandikana ny valiny amin'ny olombelona dia midika fa ny NMN dia afaka manome metabolisme 10 ka hatramin'ny 20 taona latsaka ny olona.
Ireo fanampiana 12 manohitra ny fahanterana tsara indrindra
Nicotinamide riboside sy nicotinamide mononucleotide
Fepetra ny fihinanana siramamy.
Aza mifoka intsony.
Mampiasà menaka voanio.
Raiso beta carotene.
Misotroa dite ravina voasarimakirana.
Ovay ny toeran'ny torimaso.
Sasao ny tavanao.
Halaviro ny jiro ultraviolet
Miakatra ny antioksidananao
Mba hanampiana ny marariny hisorohana ny fahanteran'ny hoditra aloha loatra, dia omen'ireo dermatologists an-dry zareo ny torohevitra manaraka.
Arovy amin'ny masoandro isan'andro ny hodinao.
Mampiasà volon-koditra fa tsy mahazo hoditra.
Raha mifoka ianao dia ajanony.
Sorohy ny fisehoan'ny tarehy miverimberina.
Mihinàna sakafo mahasalama sy voalanjalanja tsara.
Misotroa toaka toaka.
Fanatanjahan-tena ny ankamaroan'ny andro amin'ny herinandro.
Diovy moramora ny hoditrao.
Sasao indroa isan'andro ny tarehyo ary avy eo manemboka mafy.
Atsaharo ny fampiasana vokatra fikarakarana hoditra manindrona na may.
David Sinclair dia mandray:
Resveratrol - 1g / isan'andro - maraina misy yaourt (jereo hoe aiza no hividianana) Nicotinamide Mononucleotide (NMN) - 1g / isan'andro - maraina (jereo ny toerana hividianana) Metformin (fanafody fanafody) - 1g / isan'andro - 0.5g ny maraina & 0.5g amin'ny alina - afa-tsy amin'ny andro rehefa manao fanatanjahan-tena.
Rehefa raisina am-bava: Ny ribotide Nicotinamide dia azo antoka SAFITRA rehefa ampiasaina amin'ny fotoana fohy. Ny voka-dratsin'ny ribotide nikotinamide dia mazàna matetika. Ny voka-dratsiny dia mety misy olana amin'ny vavony toy ny maloiloy sy fivontosana na olana amin'ny hoditra toy ny mangidihidy sy ny hatsembohana be loatra.
Rehefa nalaina am-bava: Resveratrol dia azo antoka fa azo antoka rehefa ampiasaina amin'ny habetsaky ny sakafo. Rehefa alaina amin'ny doka ka hatramin'ny 1500 mg isan'andro mandritry ny 3 volana dia azo antoka ny resveratrol. Ny fatra avo kokoa hatramin'ny 2000-3000 mg isan'andro dia nampiasaina soa aman-tsara nandritra ny 2-6 volana. Na izany aza, ireo doka resveratrol avo kokoa ireo dia mety hiteraka olana amin'ny vavony.
Ny ribotide Nicotinamide dia azo antoka fa tsy misy vokany vitsivitsy - raha misy. Amin'ny fandinihana ataon'ny olombelona, ​​ny fihinanana 1,000-2,000 mg isan'andro dia tsy nisy vokany ratsy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny fandinihana olombelona dia fohy ny faharetany ary vitsy ny mpandray anjara. Ho an'ny hevitra marimarina kokoa momba ny fiarovana azy io dia ilaina ny fandalinana olona matanjaka kokoa.
Ity NADH be loatra ity dia mety hanaparitaka ny fifandanjan'ny redox eo anelanelan'ny NADH sy ny NAD +, ary amin'ny farany dia mety hitarika amin'ny adin-tsiranoka sy ny karazana syndrome metabolika.
NR dia matetika no heverina ho mpialoha lalana tena mahomby amin'ny NAD +, saingy ny molekiola mpiray tampo aminy NMN, na dia tsy singa iray ao Basis aza, dia mampiakatra ny masony ho toy ny zaza vaovao eny an-tsena.
Iza ny Nmn supplement no tsara indrindra?
Takelaka Sublingual NMN.
Ny fomba hanerena ny fiakaran'ny haavon'ny NAD + dia naseho hanatsara ny fiasan'ny mitochondrial amin'ny biby taloha, ny famerenana ny fatiantoka sasany mitranga amin'ny taona. Ny fitantanana ny monotucleamide nicotinamide (NMN) dia naseho hanalefaka ny tsy fitoviana mifandraika amin'ny fahanterana.
Na dia napetraka aza ny fikarohana fa azo antoka ho an'ny fampiasana ny Nicotinamide Mononucleotide na NMN, dia mbola eo ny fikarohana mba hahitana ny fatra sy ny fatran'ny fatra NMN mahomby indrindra amin'ny olombelona. Na izany aza, ny fanadihadiana natao hatreto dia nametraka fa ny doka hatramin'ny 500 mg isan'andro dia azo antoka ho an'ny lehilahy. Amin'izao andro izao, ny Nicotinamide Mononucleotide dia misy amin'ny endrika samihafa, ao anatin'izany ny pilina sy vovoka. Ireo mpamatsy famenon-tsakafo NMN dia nilaza fa ny fanafody am-bava dia mandaitra amin'ny fampiroboroboana ny famokarana NAD + ao amin'ny vatana. Ireo fanambarana ireo dia mifototra amin'ny zava-misy fa ny Slc12a8, mpitatitra nukleotidamototide nikotinamide, dia manampy amin'ny fitrohana ny NMN ao anaty tsinay.
Tsy izany ny NMN. Ny NMN dia tsy endrika vitamina B3, ary tsy misy fitsapana ara-pitsaboana hanaporofoana fa mampitombo ny NAD amin'ny olombelona izany. Ny NMN koa dia tsy ilay karazan-molekiola izay raisina ho vitamina satria misy fosfat izay misy fiantraikany amin'ny fahafahany miditra sela.
Sakafo izay mampiroborobo ny haavon'ny NAD
Misy sakafo sasany izay afaka mampitombo ny haavon'ny NAD ao amin'ny vatana. Ny sasany amin'izy ireo dia misy:
Ronono vita amin'ny ronono - ny fikarohana dia nanondro fa ny rononon'omby dia loharano tsara ao Riboside Nicotinamide (RN). Ny iray litatra amin'ny ronono vaovao dia misy 3.9µmol an'ny NAD +. Ka na eo aza ny fisotroanao ronono vera mamelombelona, ​​dia miha tanora sy salama kokoa ianao!
Trondro - ity misy antony iray hafa hahafahanao mankafy trondro! karazan-trondro sasany toy ny tuna, salmons ary sardine no loharanon'ny NAD + manan-karena amin'ny vatana.
Holatra - olona maro no tia holatra ary izy ireo dia sakafo mahazatra amin'ny sakafony mahazatra. Fa fantatrao ve fa ny holatra, indrindra ny holatra crimini, dia manampy amin'ny fampiroboroboana voajanahary ny NAD? Marina izany. Noho izany, mankafy mihinana ny holatra ary manohy mijery sy tanora kokoa ary tanora kokoa!
Ny masirasira, ny masirasira dia singa iray ampiasaina amin'ny fanaovana mofo sy vokatra fanaovana mofo hafa. Ny masirasira dia misy Riboside Nicotinamide (RN), izay eo alohan'i NAD. Ity misy antony iray hafa hahafahanao mankafy ny pastry na ny mofo tianao indrindra isaky ny mitsidika ny mpanao mofo ianao! Ankafizo ny sakafo ankafizinao raha mampiroborobo ny haavon'ny NAD miaraka amin'izay. Tena mahafinaritra izany!
Legioma maitso - ny legioma maintso dia misy otrikaina isan-karazany ao aminy izay mahasoa amin'ny fomba isan-karazany. Vao tsy ela akory izay dia nanjary mazava fa ny anana maintso dia loharano tsara an'ny NAD ho an'ny vatana. Ny sasany amin'ireo legioma ireo dia misy voanjo sy asparagus.
Voamaina manontolo - araka ny efa noresahina tetsy aloha, ny Vitamin B3 dia misy RN ihany koa, ilay mpialoha lalana ny NAD. Na izany aza, rehefa masaka na voahodina ny legioma, kojakoja amin'ny sakafo na voamadinika dia very ny sakafo mahavelona azy ary koa ny loharano vitamina. Noho izany dia asaina ianao mba hihinana legioma manta ihany koa ary hihinana voamaina manontolo fa tsy sakafo voahodina.
Atsaharo ny zava-pisotro misy alikaola - NAD dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fizotran'ny metabolika ankapobeny amin'ny vatana. Ny alikaola dia manelingelina ireo fizotrany ireo ary mampihena ny fahombiazan'ny NAD. Noho izany, tokony hialanao ny fisotro zava-pisotro misy alikaola be loatra satria tsy tsara amin'ny fahasalamanao koa izany.
Ny 'Niacin flush' dia voka-dratsin'ny fihinanana niacin fanampiny (Vitamina B3). Ny flush dia mitranga rehefa ny niacin dia mahatonga ny capillaries kely amin'ny hoditrao hihalalaka, izay mampitombo ny fikorianan'ny rà mankany ambonin'ny hoditra. Tsy toy ny fanampiana vitamina B3 (niacin), ny nikotinamide riboside dia tsy tokony hiteraka fikolokoloana tarehy.
Ny NMN dia nukleotida iray nalaina avy amin'ny ribose sy nikotinamide. Toy ny ribotide nicotinamide (Niagen), ny NMN dia avy amin'ny niacin, ary mpialoha lalana ny NAD +. NMN Canada: Ny mononucleotide Nicotinamide dia tsy azo amidy amin'izao fotoana izao ho famenon-tsakafo any Canada.
Nandritra ny taona maro, fanadihadiana maro no natao handinihana raha azo antoka na tsia ny fanjifana NMN amin'ny olombelona. Ireo fandinihana ireo dia nampiseho hatrany hatrany fa ny fihinanana Nicotinamide Mononucleotide dia azo antoka tanteraka rehefa voafetra ny fatrany. Amin'ny ankapobeny, ny lehilahy dia atoro hevitra hifikitra amin'ny fatra isan'andro tsy latsaky ny 500 mg. Na izany aza, tsy maintsy asongadino fa ny FDA dia mbola tsy nanaiky ny NMN ho fanafody azo antoka. Noho izany, raha manana allergy na olana ara-pahasalamana ianao, dia tsara kokoa ny manatona ny dokoteranao alohan'ny hanombohanao ny fanampiana NMN.
Ny NAD sy ny NMN dia mpamatsy famenon'ny anti-fahanterana malaza ary noho ny antony tsara.
Mampiroborobo voajanahary ny haavon'ny NAD
Famenon-tsakafo Nicotinamide Riboside
Ny tara-masoandro be loatra mety tsy ho tsara!
Mba hanatsarana ny haavon'ny NAD + dia azonao atao ny mandray ny kapsily NMN nahemotra miaraka amin'ny Sirtuin Activator toy ny Resveratrol miaraka amin'ny yaourt matavy feno izay manampy ny bioavailability of Resveratrol.
Raha mandray NMN ianao izao na mieritreritra ny hanomboka dia diniho ny fampiarahana azy io amin'ny TMG ho fanohanana fanampiny ho an'ny methylation. Ny mpamatsy methyl hafa izay mety ilaina dia misy ny methylated B6, B12, ary ny folate.
Inona ny maha samy hafa ny nikotinamide sy ny nikotinamide riboside? (3)
Niacin dia endrika nikôtinina misy oksizenina izay azon'ny vatana avadika ho NAD. Ny Nicotinamide dia amide an'ny niacin izay mitovy kokoa amin'ny NAD ary misy vokany vitsy kokoa. Ny nikotinamide riboside dia endrika nikôtinamidta syntetika izay samy manana ny toetrany.
Toy ny ribotidan'ny nicotinamide, ny NMN dia avy amin'ny niacin, ary ny olombelona dia manana anzima izay afaka mampiasa NMN hiteraka dinototeide adenine (NADH). Ao amin'ny totozy, ny NMN dia miditra amin'ny sela amin'ny tsinay kely ao anatin'ny 10 minitra niova ho NAD + amin'ny alàlan'ny mpitatitra Slc12a8 NMN.
Nicotinamide riboside dia mpialoha lalana voajanahary amin'ny nikotinamide adenine dinucleotide (NAD +), mpanelanelana mpitsikera ny vokadratsin'ny famerana ny kaloria, ary noho izany dia singa mitetika famerana ny kaloria. Vao haingana izahay no nahavita ny fandalinana pilotika voalohany momba ny famenon-tsakafo nikotinamide riboside ho an'ny olon-dehibe salama antitra sy antitra ary nampiseho fa ny 6 herinandro fanampiny dia nampihena ny tosidra systolika (SBP) hatramin'ny 8 mmHg amin'ny olona manana SBP fototra 120-139 mmHg (SBP avo / fiakaran'ny tosidrà 1) raha ampitahaina amin'ny plasebo, ary ny fihenan'ny arterialy ambany, mpamantatra mahaleo tena matanjaka momba ny CVD ary ny aretina sy ny mety maty.
Betaine dia hita ao amin'ny zavamiaina bitika, zavamaniry ary biby ary singa manan-danja amin'ny sakafo maro, toy ny varimbazaha, akorandriaka, epinara ary siramamy. Betaine dia fitambarana amonium quaternary amonium izay fantatra ihany koa amin'ny hoe trimethylglycine, betaine glycine, lycine, ary oxyneurine.
Ireto misy sakafo 10 manohitra fahanterana tsara indrindra hamelomana ny vatanao ho an'ny mamirapiratra izay avy ao anatiny.
Mena dipoavatra mena
Mampiasà sarontava Hydrating.
Misafidiana Luminous Foundation
Diovy kely ny volonao
Exfoliate (Fa Aza atao be loatra)
Fotsy ny fantsonao
Farano amin'ny zavona mineraly ny fijerinao
Arovy amin'ny masoandro isan'andro ny hodinao
Mampiasà volon-koditra fa tsy mahazo hoditra
Raha mifoka ianao dia ajanony
Sorohy ny fisehoan'ny tarehy miverimberina
Mihinàna sakafo mahasalama sy voalanjalanja tsara
Misotroa toaka toaka
Fanatanjahan-tena ny ankamaroan'ny andro amin'ny herinandro
Diovy moramora ny hoditrao
Fy ovy mamy ho an'ny paty frantsay
Mofo mitsimoka ho an'ny mofo fotsy
Tantely na voankazo ho an'ny siramamy fotsy
Menaka oliva na zavokà ho an'ny margarine
Mifikitra amam-borona ho an'ny hena voahodina
Mieritrereta indroa momba ny soda sy ny kafe
Misotroa toaka amin'ny antonony
Aza atao mahandro amin'ny hafanana be
Fractose miady amin'ny asidra lipoika
Ny vitamina C koa dia afaka manampy amin'ny fandroahana ireo fambara fahanterana noho ny anjara asany lehibe amin'ny syntetika collagen voajanahary amin'ny vatana. Manampy amin'ny fanasitranana ny hoditra simba izany ary, amin'ny tranga sasany, mampihena ny fisehon'ny ketrona. Ny fihinanana vitamina C ampy dia afaka manampy amin'ny fanamboarana sy fisorohana ny hoditra maina koa.
Ny fahanterana dia famerenana amin'ny laoniny ny fotoana sy fanampiana ny asan'ny vatan'olombelona. Na dia tsy azo ihodivirana ary tsy azo ihodivirana ny fahanterana, ny mpahay siansa dia nanokana taona maro hahatakarana ny fomba hampihemotra sy hifehezana an'io fomba io. Ity fikarohana mitohy ity dia nanjary nahitana akora sy fitambarana marobe misy fananana manohitra fahanterana izay azo ovaina ho famenonan'ny anti-fahanterana. Ny iray amin'ireo fitambarana manana fananana manohitra fahanterana manan-danja izay tsapan'ny mpahay siansa hoe NMN na Nicotinamide Mononucleotide. Amin'ity lahatsoratra ity dia mifanakalo hevitra momba ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny NMN izahay ary koa ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny nicotinamide mononucleotide amin'ny 2022.
Hatramin'ny taona vitsy lasa izay, ny fandinihana rehetra mifandraika amin'ny fampiasana NMN dia natao tamin'ny biby ary na dia mampiseho valiny mahafa-po aza ireo fanadihadiana ireo dia tsy ampy ireo vokatra ireo mba hametrahana ny tombony amin'ny fampiasana NMN amin'ny olombelona. Tao amin'ny 2016, nisy fanadihadiana iray natao hanadihadiana ny fiarovana ny fihinanana NMN sy ny fizotrany amin'ny ràn'olombelona. Ny valiny dia nitondra valiny mahafa-po. Avoahy izay, nisy fanadihadiana iray hafa natao tamin'ny taona 2016 handinihana ny vokatry ny fihinanana NMN tamin'ireo vehivavy antitra 50 mijaly noho ny BMI avo, ny glucose amin'ny ra, ary ny triglyceride amin'ny rà. Nahomby ny fianarana. Na izany aza, satria voafetra ho an'ny vehivavy efa antitra ny toeram-pianarana, nino ny mpahay siansa fa ilaina ny porofo bebe kokoa hametrahana raha azo antoka ho an'ny olombelona ve ny fihinanana NMN.
Noho izany, vao haingana kokoa, tamin'ny taona 2019, dia nisy ny fanadihadiana natao tao amin'ny Unit Clinic Fitsapana momba ny fitsaboana any amin'ny University of Medical University. Ny lohahevitra tamin'ilay fanadihadiana dia lehilahy 10 teo anelanelan'ny 40 sy 60. Ireo lehilahy ireo dia nitarika fatra nanomboka tamin'ny 100 mg ka hatramin'ny 500 mg. Ny fandinihana dia nofaranana fa ny NMN dia zakan'ny olombelona tsara ary azo antoka fa mandany raha toa ka ny zakany dia zahana tsara. Zava-dehibe io fandalinana io satria io no fanadihadiana voalohany nataon'ny NMN tamin'ny olombelona handinika ny vokatry ny NMN amin'ny fahasalaman'ny olombelona manontolo. Raha vantany vao tafapetraka fa azo antoka ny fanjifana NMN dia nanomboka nanapoaka baomba ny tsena niaraka tamin'ny famatsiana NMN ny mpanamboatra, izay lasa fahita ankehitriny.
Amin'ity fizarana ity dia miresaka momba ny tombontsoa mety ho azo avy amin'ny Nicotinamide Mononucleotide na ny tombontsoa NMN isika.
① Miadana ny fahanteran'ny NMN
Iray amin'ireo tombony lehibe indrindra amin'ny NMN dia ny mampihena ny fizotran'ny fahanterana. Taona vitsy lasa izay, David Sinclair, ilay biolojika malaza momba ny biolojika ary mpampianatra ny Genetika, dia nanome porofo fa mihena ny fahanterana sy ny fahatsaran'ny aretina mifandraika amin'ny olombelona. Na izany aza, mihena ny famokarana NAD + amin'ny fahanterana. Noho izany, rehefa mihalehibe ny olona, ​​mitombo ny filàna NAD + ho ao anaty vatany. Eto dia milalao ny NMN: miditra ao amin'ny sela ny NMN ary mandalo fiovan'ny simika maromaro alohan'ny hanodinana azy amin'ny NAD + ary mampihena ny fizotran'ny asa vokatry ny taona.
② Ireo olona iharan'ny diabeta dia afaka mandray soa amin'ny fanjifany
Nisy ny fandinihana natao handinihana ny fomba nanampian'ny NMN fanidiana am-bava tamin'ny diabeta ary ny diabeta mifandraika amin'ny sakafo. Ny fandinihana dia nanambara fa ny totozy nomena ny fampidirana NMN am-bava dia nampitombo ny fahatsapan-tena amin'ny insuline ary koa ny fiteniny. Ity fanadihadiana ity dia naneho fanamarihana vitsivitsy fa ny Nicotinamide Mononucleotide na ny fanabeazana oral oral NMN dia afaka manampy ny olona voan'ny diabeta.
③ Ny fanjifana NMN dia mifandray koa amin'ny fahasalaman'ny fo
Ny fandinihana iray hafa dia natao handinihana ny fiantraikan'ny fihenan'ny NMN amin'ny fahasalaman'ny fo amin'ny totozy Ny fandinihana dia nanambara fa ny NMN dia tsy namadika ny lalan-drà mifandraika amin'ny fahanterana fotsiny ary ny fahasimban'ny capillary amin'ny totozy fa kosa nitarika ny fikorianan'ny ra. Ny tena nahagaga dia ny nahitana ny fipoahan'ny lalan-drà vaovao dia ny fipoahan'ny lalan-drà vaovao. Vao haingana izay, nisy ny fandinihana iray hafa natao natao handinihana ny vokatry ny NMN amin'ny fahasalamana amin'ny totozy ary ity fanadihadiana ity koa dia naneho valiny mitovy. Ireo fanadihadiana ireo dia nanome porofo ampy ho an'ny mpikaroka hino fa ny fanjifana NMN dia mampiroborobo ny fahasalaman'ny fo ao anatin'ny olombelona koa.
④ Afaka mandray soa amin'ny fampiasana NMN ny olona voan'ny Alzheimer
Amin'ireo olona tratry ny aretin'i Alzheimer dia midina be ny tahan'ny NAD. Noho izany, rehefa mihinana NMN ny olona mijaly amin'ny Alzheimer, dia mihetsika ny vatana amin'ny fampitomboana ny habetsaky ny NAD +, izay mitarika amin'ny fitomboan'ny fanaraha-maso môtô, mampitombo ny asan'ny SIRT3, manatsara ny fitadidiana ary mampihena ny neuroinflammation. Noho izany, ny olona mijaly amin'ny Alzheimer dia afaka mahazo tombony amin'ny fihinanana NMN.
⑤ Manatsara ny fiasan'ny voa koa ny NMN
Ny fampidirana ny NMN am-bava dia mifamatotra amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny voa. Izany dia satria ny NMN dia mampitombo ny famokarana NAD + sy SIRT1, ka mifamatotra ireo singa voavitran'ny voa.
Raha mitady hividy vovoka Nicotinamide Mononucleotide (NMN) betsaka ianao, ny toerana tsara indrindra hividianana vovoka NMN dia ny cofttek.com. Cofttek dia orinasa mpamokatra fanafody teknolojia avo lenta izay manome vokatra vaovao sy avo lenta hatramin'ny 2008. Ny orinasa dia mirehareha amin'ny ekipa R&D manaitra miaraka amin'ireo olona za-draharaha nanolo-tena amin'ny fampandrosoana ny vokatra mifaninana. Cofttek manana mpiara-miombon'antoka ary mamatsy ny vokariny amin'ireo orinasa mpamokatra fanafody any Chine, Eropa, India ary Amerika Avaratra. Ny β-Nicotinamide Mononucleotide nomen'i Cofttek dia avo lenta ary azo antoka tanteraka hohanin'ny olombelona. Ny tena zava-dehibe, ny orinasa dia manome an'ity vovoka ity amin'ny ankapobeny, izany hoe ao anaty singa 25kgs. Raha izany, raha mitady vidio be vovoka ity vovoka ity, Cofttek no orinasa tokony hifandraisanao - izy ireo no mpamatsy vovoka Nicotinamide Mononucleotide (NMN) tsara indrindra eny an-tsena.
(1). Yao, Z., et al. (2017). Ny Nicotinamide Mononucleotide dia manakana ny fampiatoana an'i JNK hiadiana amin'ny aretina Alzheimer.
(2). Yoshino, J., et al. (2011). Nicotinamide Mononucleotide, mpanelanelana lehibe iray an'ny NAD (+) mpanelanelana, dia mitsabo ny Pathophysiology momba ny Diet sy Diabeta voajanahary anton'ny taonan'ny totozy. Metabolisma sela.
(3). Yamamoto, T., et al. (2014). Nicotinamide Mononucleotide, mpanelanelana amin'ny Synthesis NAD +, miaro ny fo amin'ny Ischemia sy ny Reperfusion.
(4). Wang, Y., et al. (2018). NAD + Supplementation Manatsara ny toetran'ny Key Alzheimer sy ny valin'ny fahasimban'ny ADN amin'ny maodely AD Mouse vaovao miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fanamboarana ADN.
(5). Keisuke, O., et al. (2019). Ny fiantraikan'ny fiovan'ny metabolika NAD amin'ny aretina metabolika. Gazetin'ny siansa biomedika
(6). Fitsangatsanganana ohatra.
(7). Oleoylethanolamide (oea) - ilay wand mahagaga amin'ny fiainanao.
(8). Anandamide vs cbd: iza no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Izay rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
(9). Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(10). Fanampiny magnesium l-threonate: tombontsoa, ​​fatra, ary vokany hafa.
(11). Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(12). Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenon-tsakafo resveratrol.
(13). Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(14). Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).
(15). Ny famenon-tsakafo nootropic tsara indrindra an'ny alpha gpc.
Heveriko fa ny NMN dia mandaitra kokoa noho ny nikotinamide riboside (NR), satria afaka mandray tsara kokoa ao amin'ny tsinay kely izy.
Amin'ny ankapobeny ny olona dia tsy maintsy mahita ny famenon-tsakafo mety amin'ny vatany, mazàna eo anelanelan'ny 250mg sy 1g. Arakaraka ny maha-antitra anao no ahafahanao mahazo tombony amin'ny mahazatra.
Aza manampy amin'ny Nicotinamide (NAM) fotsiny. Raha ny marina dia manao ny mifamadika amin'izay tadiavinao. Raha manome ny vatanao NAM ianao dia hiteraka fihenan'ny NAD +.
Misafidiana na NR na NMN. Aza manandrana mividy zavatra alokaloka mora vidy any Alibaba na zavatra hafa. Voaporofo tamin'ny lasa fa sandoka ny ankamaroan'ireny zavatra ireny ary mety handratra anao.
Raha raisina alohan'ny homamiadana, ny haavon'ny NAD + avo lenta dia tokony hampihena ny risika fiovan'ny ADN sy ny fanangonana sela senescent, ny tena olana tokana dia ny fandraisana ny NAD + booster raha manana homamiadana izy ireo ankehitriny, satria afaka manafaingana ny fivoaran'ny fivontosana miankina amin'ny NAD + izy ireo rehefa mampiasa NAD + sahala amin'ny ataon'ny sela mahazatra, ka izany no tsara hanaraha-maso ny isan'ireo sela selanao fotsy isam-bolana. Raha tsy voan'ny homamiadana ianao dia tokony hisoroka izany.
Tsy afaka miresaka amin'ny mitochondria aho, fa afaka herintaona sy tapany maka nmn (sublingual) dia mila esorinao hiala amin'ny tanako maty mangatsiaka izany.
Angovo bebe kokoa (tahiry angovo, tsy mahatsapa tariby), fanarenana haingana kokoa ho an'ny fanatanjahan-tena sy ny adin-tsaina, torimaso tsara kokoa, na dia nanangana hozatra voalohany tamin'ny fiainako aza.
Ny Sublingual NMN ao amin'ny 1g dia manome tanjaka lehibe ho ahy. Tsikaritro avy hatrany. Miova koa ny fahitako (lasa maranitra). Ary koa, niverina niverina tamin'ny vanim-potoana ny trondro. ;-)
David Sinclair dia nanolotra soso-kevitra fa ny totozy amin'ny paikadim-pilina tsy maharitra ela dia lava indrindra ary misy dikany amiko izany.
Amin'ny ankapobeny ny olona dia mila mahita ny famenon-tsakafo mety amin'ny vatanao, matetika eo anelanelan'ny 250mg sy 1g.
Arakaraka ny maha-antitra anao no ahafahanao mahazo tombony amin'ny mahazatra.
Mijanona ao mandritra ny fotoana maharitra. Tsikaritro fa nisy fery taloha nanjavona, kitapo kely ambany masoko, ary fiovan'ny metabolisma lehibe. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina
Misaotra, faly aho nahita lahatsoratra mahafinaritra sy mahatsikaiky toy izany.